Jurgen Klopp Oo Ku Sigtay Inuu Gacanta Ula Tago Tababaraha Burnley – Siday Wax U Dhaceen? – Cadalool.com
Tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool, Jurgen Klopp ayaa ku dhawaaday inay dhibaato ka dhex dhacdo dhiggiisa Burnley ee Sean Dyche.
Labada kooxood ee Liverpool iyo Burnley ayaa xalay kulan ku yeeshay garoonka Turf Moor, waxaana gool la hor martay Burnley, hase yeeshee Liverpool ayaa si cajiib ah uga daba timid, isla markaana saddex gool ugu beddeshay goolka madiga ah ee lagaga hor maray, taas oo ka caawisay inay sii dheerayso farqiga goolasha ay ka sarrayso Chelsea oo kaalinta saddexaad fadhida balse xalay la kulantay guul-darro markii ay booqatay Wolverhampton.
Jurgen Klopp oo Sabtidii lagu riday ganaax 8000 Gini ah markii uu dabbaal-deg la dhex orday garoonka Anfield ciyaartii ay ku martigeliyeen Everton, ayaa mar kale xalay ku sigtay inuu madax la galo ganaax kale, kaddib markii uu ku dhowaaday inuu gacanta ula tago tababare Sean Dyche.
Markii uu garsooraha ciyaartu yeedhiyey siidhiga dhamaadka ayaa uu tababare Klopp u dhaqaaqay dhinaca tababare Sean Dyche si ay isku gacan qaadaan laakiin intii aanu gaadhin ayaa uu sameeyey ficillo muujinaya inuu u xanaaqsan yahay kooxda Bunley oo intii ay ciyaartu socotay uu ka gadooday khaladaad lagula kacay ciyaartoygiisa.
Dyche oo kusii socda qolka lebbiska ayaa si adag uga hor yimid Klopp, waxaana uu diiday inuu gacantiisa taabto, halkaas oo keentay in macallinka Liverpool uu isaguna cadho kale qaado.
Klopp ayaa markaa kaddib sii daba dhaqaaqay Dyche, waxaanu weydiiyey sababta ay kooxdiisu qaabka dagaalka ah ugu ciyaartay, hase yeeshee waxa uu arkay Dyche oo farta kor u taagaya si uu iskaga aamusiiyo, waxaanay taasi keentay in Klopp uu ku dhawaado inuu soo qabto.
Si kastaba ha ahaatee, Klopp ayaa u muuqda mid dhibaato ka haysato dhaqankiisa garoonka dibeddiisa oo uu xamaasaddiisa xakamayn kari waayayo.